valanaretina: mikatona ny FJKM Andravoahangy Fivavahana | NewsMada
valanaretina: mikatona ny FJKM Andravoahangy Fivavahana
Nanapa-kevitra hanakatona ny fiangonana ihany koa ny FJKM Andravoahangy Fivavahana manomboka anio noho ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19. Hatao izany ho fiarovana ny mpianakavin’ny finoana rehetra.
Hatramin’ny fotoana tsy voafetra ny fikatonana. Afaka manaraka ny fotoam-bavaka amin’ny “facebook”-n’ny fiangonana kosa ny kristianina isaky ny alahady. Mitohy mianatra kosa ny katekomena isaky ny alahady hariva.
Tsy misy ny asam-pifohazana. Toraka izany ny fivorian’ny sampana rehetra, mitsahatra avokoa mandritra ny fotoana mampamaivay ny fiparitahan’ny valanaretina.
Marihina fa efa maro ireo fiangonan-dehibe mikatona eny hatramin’ny fetin’ny Paska teo aza. Sarotra ny mifehy ny aretina ankehitriny na efa mampihatra antsakany sy andavany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra aza ny fiangonana.